ZANANDRANAVALONA : Efa tapaka ny daty iraisana amin’ny taom-baovao Malagasy · déliremadagascar
ZANANDRANAVALONA : Efa tapaka ny daty iraisana amin’ny taom-baovao Malagasy
Ny 14, 15, 16 jona 2018 no hankalaza ny Alahamady na ny taom-baovao Malagasy ny fikambanan’ny Zanandranavalona. Andro alakamisy ny 14 jona 2018 ka ny 15 jona 2018 vao tena hanomboka ny fankalazana. « Andro fady tsy hahavanonan-javatra ny andro alakamisy. Mbola mitandro izany ny fikambanan’ny Zanadranavalona », hoy ny filohan’ny fikambanana Alain Ravelonarivo. Eny Anosimanjaka ny fankalazana ny taom-baovao Malagasy eto Imerina. Amin’ny 08 ora maraina ny fanandroana, amin’ny 10 ora maraina kosa ny fitsofan-drano. Handravaka ny taom-baovao Malagasy ny hiragasy izay katrohan’ny tarika Emislon Tsy makalagy sy Sahavato Ambohimandroso.
Efa nisy ny fivoriana niarahana teny amin’ny ministeran’ny kolontsaina sy ny vakoka fa ho atao isaky ny volana septambra ny daty iraisana amin’ny fankalazana ny taom-baovao Malagasy. Efa notanterahina izany tamin’ny herintaona. Any Fianarantsoa no hanaovana ny taom-baovao Malagasy iraisan’ny foko 22 amin’ity taona ity. Ny 9 ka hatramin’ny 11 septambra 2018 ny daty voatondro. “Hisy ny hetsika fitadiavam-bola hikarakarana io taom-baovao Malagasy io ka eny amin’ny “espace Pk 0” Soarano no hanatontosana izany ny voalohany volana jolay 2018”, hoy ny Mpandrindra ny fankalazana ny taom-baovao Malagasy iraisana, Randriamaronony Razanaka Laurent.